Sei iPhone Yangu Ichiti Kwete SIM Kadhi? Heino Iyo Chaiyo Kugadzirisa! - Iphone
sei yangu iphone 6s skrini yakaenda nhema
ndeapi marongero ekutakura pane ipad
foni inoramba ichibvisa kubva pawifi
chii chimwe chiri pa iphone
Zuva riri kupenya, shiri dziri kurira, uye zvese zvakanaka nenyika, kusvikira iwe wazviona izvo 'Hapana SIM' yakatsiva zita remutakuri wako wenhare mukona yekumusoro-kuruboshwe kona yekuratidzira kwe iPhone yako. Iwe hauna kutora iyo SIM kadhi kubva kune yako iPhone, uye ikozvino iwe haigone kufona, kutumira kana kugamuchira mameseji, kana kushandisa nharembozha.
Kana iwe uri kushamisika, 'Sei yangu iPhone ichiti hapana SIM kadhi?', Kana kana iwe usingazive kuti SIM kadhi chii, iwe wauya kurudyi nzvimbo. Iyi nyaya inowanzo kuve nyore kuongorora, uye Ini ndinokufamba iwe kuburikidza nedanho nhanho-nhanho kuti iwe ugone kugadzirisa iyo 'Hapana SIM' kukanganisa zvachose.
Chii chinonzi SIM Kadhi Uye Chii Chainoita?
Kana usati wambonzwa nezve SIM kadhi, hausi wega: Zvirinani, haufanire kumbonetseka nezvazvo. Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchisangana naye.
Kana iwe uchizomboda kurasa shamwari yako yeteki nefoni mbozha, SIM inomirira 'Subscriber Identity Module'. Yako SIM SIM kadhi inochengetera zvidiki zvidimbu zve data zvinokusiyanisa iwe nevamwe vese vashandisi ve iPhone pamusoro penharembozha, uye iine mvumo makiyi anotendera yako iPhone kuwana izwi, zvinyorwa, uye data masevhisi aunobhadhara pane yako sero bhiri yefoni. Iyo SIM kadhi ndiyo chikamu cheyako iPhone iyo inochengeta yako nhamba yefoni uye inokutendera iwe kuti uwane iyo cellular network.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti iro basa reSIM makadhi zvachinja pamusoro pemakore, uye mazhinji mafoni ekare aishandiswa kushandisa SIM makadhi kuchengetedza runyorwa rwevanosangana. Iyo iPhone yakasiyana nekuti inochengeta vako vokukurukura paICloud, yako email server, kana mune yako iPhone yemukati ndangariro, asi kwete paSIM kadhi rako.
Imwe yekushanduka kunozivikanwa muSIM kadhi yakauya pamwe nekuunzwa kwe4G LTE. Pamberi peiyo iPhone 5, vatakuri vakaita saVerizon uye Sprint vanoshandisa tekinoroji yeCDMA vakashandisa iyo iPhone pachayo kubatanidza nhamba yemunhu kune nharembozha yedatha, kwete SIM kadhi rakasiyana raizoiswa mukati. Mazuva ano, ese maratidziro anoshandisa SIM kadhi kuchengetera avo vanyore 'nhare dzenhare.
Sei Tichida SIM Kadhi Zvakadaro? Chii Chakanakira?
SIM makadhi anoita kuti zvive nyore kwauri kutumira nhamba yako yefoni kubva kune imwe foni kuenda kune imwe, uye ivo vanowanzo kuve vakashinga kwazvo. Ndatora maSIM card kubva mumaPhones mazhinji anga akambokangwa nekukuvara kwemvura, ndokuisa SIM kadhi mu iPhone yekutsiva, ndikamutsa iyo iPhone nyowani pasina dambudziko.
SIM makadhi zvakare anoita kuti zvive nyore kwauri kuti uchinje vatakuri kana iwe uchifamba, chero yako iPhone iri 'kukiyiwa'. Kana iwe ukaenda kuEurope, semuenzaniso, unogona kudzivirira mari dzakakwidibira dzepasi rese nekusaina muchidimbu nemutakuri wemuno (zvakajairika muEurope) uye nekuisa yavo SIM kadhi mune yako iPhone. Isa yako yekutanga SIM kadhi mu iPhone yako paunodzokera kumatunhu, uye wakanaka kuenda.
Ndeipi Iyo SIM Kadhi Pane Yangu iPhone Uye Ndingaite Sei Kuti Ibvise Iyo?
Ese maPhones anoshandisa tireyi diki inonzi SIM tireyi kubata SIM kadhi yako munzvimbo kwayo. Kuti uwane yako SIM kadhi, nhanho yekutanga ndeye kuburitsa SIM tireyi nekuisa pepa clip muburi diki muSIM tireyi kunze kweiyo iPhone yako. Apple ine peji rakakura rinoratidza iyo nzvimbo chaiyo yeSIM tireyi pane yega yega iPhone modhi , uye zvichave zviri nyore kwauri kuti utore nekukurumidza pawebhusaiti yavo kuti uwane kwairi uye wozodzoka pano chaipo. Isu tave kuda kuongorora uye kugadzirisa iyo 'Kwete SIM' kukanganisa zvakanaka.
Kana Iwe Usiri Kuda Kushandisa Paperclip…
Kana iwe usinganzwe wakasununguka kunamatira paperclip mukati me iPhone yako, unogona kutora a inobata SIM kadhi adapta kit kubva kuAmazon.com iyo inosanganisira yehunyanzvi sim kadhi ejector chishandiso uye adapta iyo inokutendera iwe kushandisa nano SIM kadhi kubva kune iyo iPhone 5 kana 6 mune yekare modhi iPhones kana mamwe mafoni. Kana yako iPhone ikambokuvara, unogona kushandisa kit iyi kuburitsa iyo SIM kadhi uye kuinamatira mu iPhone yako yekare (kana imwe nharembozha inotora SIM kadhi), uye kuridza nhare nenhamba yako yefoni ipapo ipapo.
Ini Ndinogadzirisa Sei Iyo iPhone 'Kwete SIM' Kanganiso?
Apple yakagadzira peji rekutsigira iyo inogadzirisa iyi nyaya, asi ini handidi kuti ndibvumirane nehurongwa hwematanho avo ekugadzirisa matambudziko uye hapana kana tsananguro yechikonzero chiri shure kwezvavanofunga. Kana iwe watove kuverenga yavo chinyorwa kana vamwe uye iwe uchiri kusangana ne 'No SIM' nyaya ne iPhone yako, ndinovimba chinyorwa ichi chinokupa iwe kutsanangurwa kwakasimba kwedambudziko uye ruzivo iwe rwaunoda kuti ugadzirise.
Izvi zvingaite sezviri pachena, asi zvinobatsira kudzokorora dambudziko pano: Yako iPhone inoti 'Hapana SIM' nekuti haichisiri kuona iyo SIM kadhi yakaiswa muSIM tray, kunyangwe iri chaipo.
Kungofanana nenyaya zhinji pane iyo iPhone, iyo 'Hapana SIM' kukanganisa kunogona kunge iri yehardware kana dambudziko re software. Pa peji rinotevera , tichatanga nekugadzirisa zvinogona kuitika zvehardware nekuti zvinowanzo kuve nyore kuona nekutarisa kunoonekwa. Kana izvo zvikasagadzirisa, ini ndinokufamba iwe kuburikidza nesoftware troubleshooting matanho ayo achakubatsira iwe kuongorora uye kugadzirisa dambudziko rako .